Inona no tombony azo avy amin'ny Lactoferrin mahasoa ho an'ny olon-dehibe sy ny zazakely?
Aprily 9, 2020
Lactoferrin (LF) dia proteinina voajanahary misy ao amin'ny ronono mammalian ary mampiseho toetra manohitra mikroba. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 60, dia maro ny fandalinana hametrahana ny lanjan'ny fitsaboana ny glycoprotein ary ny andraikiny amin'ny tsy fahatomombanana.
Na dia mety hahazo ny fanampinanan'ny zaza minono aza ny zaza, ny vovony lactoferrin vita amin'ny varotra dia azo omena amin'ny taona rehetra.
1. Inona no atao hoe Lactoferrin?
Lactoferrin (146897-68-9) dia glycoprotein mifatotra vy ao anatin'ny fianakavian'i transferrin. Ity proteinina ity dia manankarena amin'ny antibiôsy ary misy amin'ny rononon'olombelona sy omby. Ho fanampin'izany, dia siansa amin'ny ankamaroan'ny tsiambaratelo biolojika toy ny ranomaso, ranoka, ranon-dra, ny pancreatic jus ary ny heny. Hamoaka ny glycoprotein ny vatana ho setrin'ny fampientanam-po mamaivay.
Alohan'ny ahafahanao manao a mividy lactoferrin, raiso ravina iray amin'ny alàlan'ity fanamarihana ity mba hahitana raha mendrika izany ny fametrahana.
Lactoferrin be dia be no misy ao amin'ny colostrum, izany no tsiranoka mivaingana voalohany vokarina aorian'ny nahaterahany. Tsiahivina ao anaty ronono ao anatin'ny roa na telo andro aorian'ny fampitana aorian'izay. Na dia manakaiky akaiky aza ny fitrandrahana colostrum, dia mbola azo jerena amin'ny ronono mandalo sy matotra ny lanjany lehibe.
Noho izany, ahoana ny fomba itondranao ny lactoferrin amin'ny bovine colostrum?
Avelao aho hitondra anao amin'ny dingana mahitsy amin'ny fampisarahana ny lactoferrin.
Ny dingana voalohany dia ny fisarahana ny whey amin'ny ronono. Whey no vokatra vokarin'ny rano izay mijanona aorian'ny fisotroana ronono na mitambatra ronono miaraka amina manta misy asidra. Ny dingana mitoka-monina dia mampiasa kromatograpika fifandraisana mikrofobika sy chromatography ion-fifanakalozana ary arakaraka ny elitera mahomby amin'ny vahaolana masira.
Ny colostrum Bovine dia avy amin'ny ozatra. Manankarena proteinina, antibiôsy, mineraly, otrikaina, karbônina, etaka. Ireo tarehimarika ireo dia nanamafy ny lanjan'ny fitsaboana ny colostrum, noho izany dia nahasarika ireo mpahay siansa mpikaroka ao amin'ny sehatry ny fitsaboana.
Raha toa ka mihena ny votoatin'ny lactoferrin rehefa mitombo ny fotoana aorian'ny postpartum, dia natokana ho an'ny zaza ny loharano iray soloina. Raiso, ohatra, ny LF mahazatra aorian'ny fiterahana dia eo amin'ny 7-14mg / ml. na izany aza, mety hianjera mankany amin'ny 1mg / ml ny fifantohana amin'ny ronono matotra.
Raha te hifaly amin'ny lactoferrin immunological ianao dia tokony hiditra ao amin'ny bovine colostrum supplementation.
Ny vovony mason-tsolika lactoferrin vita amin'ny varotra dia vokatry ny colostrum bovine. Na dia izany aza dia niahiahiana ho an'ny olona sasany izay hita fa mifangaro amin'ny aretina madinin'ny omby ity vokatra ity. Azafady, omeko toky ianao fa tsy fahita izany toe-javatra izany. Ho fanampin'izany, ny famenon-jaza lactoferrin sasany dia fantsom-bary vita amin'ny masin-javamaniry, ho tombontsoan'ny olona tsy matotra amin'ny lactose.
2. Maninona no mampiasa Lactoferrin Powder ho fanampin-tsakafo fanampiny, ny tombony azo avy amin'ny Lactoferrin?
Fifehezana ny mony
Ny Cutibacterium sy propionibacterium dia tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny mony. Lactoferrin dia miasa amin'ny fanesorana ireo bakteria vy sy mampihena ny vokatr'izany.
Amin'ny toe-java-misy sasany, ny radika maimaim-poana sy ireo karazana oksizenina tsy mihetsika dia mandray anjara amin'ny ratra amin'ny sela sy ny fahasimban'ny ADN. Noho ny adin-tsaina ataan'ny oxidative, mety hitranga ny fihenan'ny ratra sy ny fiantraikany amin'ny fitomboan'ny mony. Milaza ny mpahay siansa mpikaroka fa ny lactoferrin dia hery manohitra anti-oxidant, noho izany, ny mety ho fitrandrahana ireo radika maimaimpoana.
Ny maka lactoferrin eo anilan'ny vitamin E sy ny zinc dia hampihena ny fihenan-tsinay sy ny comedones afaka telo volana.
Ankoatr'izay, ny fanaintainana dia mitarika ny fiforonan'ny mony sy kobanina amin'ny alàlan'ny fametahana ny pores. Ny toetra manohitra ny fanaintainan'ny lactoferrin dia manome antoka haingana ny fanasitranana ny lesoka.
Ny Dermatologist dia manasongadina fa ny fahasalamanao ny vavoninao dia taratry ny hoditrao. Ohatra, raha malemy na tsy mahasalama ny làlanao, dia tsy hahavaha ny fanaintainan'ny hoditra, ny fanatanjahan-tena, na ny eczema ny fampidiran-dra. Ny maka lactoferrin dia handroaka ireo zavamiaina bitika manimba eo amin'ny lalan'ny digestion raha manentana ny hetsika mahasoa Bifidus flora.
Ankoatra ny fitsaboana ny mony, ny lactoferrin dia nanamaivana ny soritr'aretin'ny psoriasis ary nanafaingana ny fanasitranana amin'ny aretin-tongotry ny tongotra neuropathic, izay miparitaka amin'ny marary manana diabeta.
Ny fandinihana tsy tambo isaina no manamafy fa ny Lactoferrin (LN) dia manakana ny otrikaretina, bakteria, parasitita ary ny areti-mifindra amin'ny fanafihana ny vatana. ny sangan'asa miasa amin'ny alalan'ny mamatotra an'ireto mikraoba ireto, ny fanamafisana ny firafitry ny sela, ary ny fanakanana ireo sela mpandray ireo sela.
Taminà fandinihana iray manokana dia nanamarika izany ny mpahay siansa lactotransferrin (LTF) dia mahomby kokoa amin'ny fisorohana ny virus momba ny herpes noho ny dikan'olombelona. Ny fandinihana vitro koa dia manondro fa ity suplement ity dia mahomby amin'ny fitantanana ny vokatry ny tsimokaretina VIH.
Ao amin'ireo dosie avo kokoa, ny lactoferrin dia miasa amin'ny fitantanana ny maha-virjin'ny Hepatitis C. Araka ny Ny fikarohana momba ny hépatology, ity fitsaboana ity dia mampitombo ny fanehoana interleukin-18, proteinina tompon'andraikitra amin'ny famerenana ny otrikaretina Hepatitis C. Ho an'ny fahombiazan'ny ambony indrindra, ny marary dia tokony ho eo amin'ny 1.8 ka hatramin'ny 3.6 grama ny famenoana isan'andro. Ny antony dia ny fatra amin'ny lactoferrin ambany dia tsy hitondra fahasamihafana amin'ny votoatin'ny viriosy.
Misy ny fanombatombanana, izay mihevitra ny LF ho fitsaboana amin'ny otrikaretina helicobacter pylori. Rehefa mametaka ny menaka miaraka amin'ny fitsaboana mavitrika mahazatra ianao, dia mety hitranga fa ny fanafody dia hahomby kokoa. Io fitakiana io dia fifandirana amin'ny taolana teo amin'ireo mpikaroka satria ny ankamaroany dia mihevitra fa ny fampiasana ny vovony lactoferrin dia tsy manan-kery raha tsy misy fatrany resahina.
Ny fitsipiky ny metabolika vy
Lactoferrin dia tsy hanova ny fifantohan'ny vy fotsiny ao amin'ny vatana fa hampitombo ihany koa ny fampidirany.
Nisy ny fandinihana klinika mitohy izay nitady hampitaha ny fahombiazan'ny LF amin'ny ferrous sulfate amin'ny anemia fahalemena vy mandritra ny fitondrana vohoka. Eny, avy amin'ny fitsarana, ny lactoferrin dia nanaporofo fa mahery kokoa amin'ny famporisihana ny fananganana hemoglobin sy ireo sela mena.
Ny vehivavy mihinana ny glycoprotein dia manana ambaratonga vy lehibe indrindra ary misy fiantraikany tsy misy fotony. Miasa ny Lactoferrin mba hampihenana ny mety ho fatiantoka, ny fiterahana preterm, ary ny fiterahana ambany fiterahana.
Noho izany, miharihary fa ny famenon-tsakafo tena tsara ho an'ny reny bevohoka sy ny vehivavy bevohoka miteraka zaza very tsy misy firy rehefa ao anatin'ny fadimbolana. Ireo legioma sy mpamatsy rà matetika dia mety handray soa amin'ny tambavy lactoferrin.
Faharoa momba ny gastrointestinal
Lactoferrin ny masin-jaza fanampiny dia mamono ny tavy. Izy io dia manala ny bakteria manimba, izay tompon'andraikitra amin'ny fanorana. Ohatra, mitantara ny mikraoba ireo ny ankamaroan'ny trangan'ny gastroenteritis sy ny enterocolitis, izay manimba ny rindrin'ny tsina dia mitarika ho amin'ny fahafatesana aloha loatra. Raha noho ny antony sasany, ny zaza dia tsy minono, dia soso-kevitra indrindra ny hifindra amin'ny bovine lactotransferrin (LTF).
3. Manome tombony amin'ny zaza ny Lactoferrin
Ny famoahan-jaza Lactoferrin dia manakana ny fitomboan'ny microorganism ao amin'ny kibon'ny zaza vao teraka. Ireo mikraoba ireo dia ahitana ny Escherichia coli, Bacillus stearothermophilus, Staphylococcus Albus, Candida albicans, ary Pseudomonas aeruginosa. Fandinihana maro no mamerina ny zava-misy fa ny fampidiran-tsakafo isan'andro amin'ny lactoferrin be dia be dia mampihena ny mety hisovan'ny gastroenteritis norovirus amin'ny zaza.
Mbola eo am-bavony dia amporisihan'ny LF ny fihanaky ny sela endothelial raha maneho ny fitomboan'ny folito lymphatic. Noho izany, miharihary fa ny fanabeazana lactoferrin dia mety ho fanafody akora manala ny tsinay manimba.
Ny fampinonoana no loharanon'ny vy amin'ny fangejan'ny neonate. Na izany aza, ny mpitsabo dia manome soso-kevitra fa ilaina ny famenon'ny vy fanampiny satria ny rononon-dreny dia misy mineraly kely fotsiny.
Avelao aho hanazava ny antony mahatonga ny LF ho fanampin-java-bidy sahaza ho an'ny zazakely preterm sy ny zaza vao teraka. Matetika ity tarika ity dia mora voan'ny asemika tsy fahampian'ny vy. Ny fitantanana ny famenon-jaza lactoferrin dia hampitombo ny hemoglobin sy sela mena ao amin'ny rafi-jaza. Ambonin'izany, ny fanadihadiana dia nanambara fa ny fampidirana vy dia mampisondrotra ny fivoaran'ny neurological amin'ny zaza.
Indraindray ireo bakteria manimba toy ny E.coli dia mamelona ny vy eo amin'ny fantsona neonatal. Ny maka lactoferrin dia hanala ny mikraoba vy ary manimba azy ireo mandritra ny fiantohana fa mahazo ny mineraly rehetra misy ny mpampiantrano azy.
LF dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fivoaran'ny rafitra fiarovana ny zazakely. Ny sasany amin'ireto vovobony lactoferrin ireto dia ahitana ny fitomboan'ny hetsika macrophages, immunoglobulins, sela NK, ary T lymphocytes, izay tompon'andraikitra amin'ny tsy fananana tsiranoka neonatal. Ny tena marina dia ny mampihena LF dia mampihena ny fanelingelenana amin'ny alerine.
4. Ahoana no fanatsarana ny lactoferrin rafitra immun?
Ireo fanelanelanana eo anelanelan'ny Fampivoarana Adaptive sy Innate
Ho an'ny valin-kery fanefitra anatiny dia miasa amin'ny fomba maro ny lactoferrin. Ohatra, manatsara ny asan'ny sela mpamono voajanahary (NK) sy ny neutrophil izany. Ny proteinina dia mampitombo ny phagocytosis ary mitombo ny macrophage.
Ho an'ny valiny famolavolana, manampy ny LF ao amin'ny fanovana ny sela T-sela sy B-sela. Raha misy ny fanaovan-javatra mampihetsi-po, ny hetsika an-trano sy ny hery fiarovana dia mety hiaraka hanohitra ny zava-nitranga.
Lactoferrin dia mifehy ny famokarana cytokine pro-inflammatory sy interleukin 12, izay mampiseho fananana miaro amin'ny pathogens intracellular.
Ireo mpanelanelana amin'ny Syndrome momba ny fanaintainan'ny aretina (System)
Ny anjara asan'ny lactoferrin vovony amin'ny fanamafisana ny karazana oksizenina mahery vaika (ROS) dia manana ny lanjany lehibe amin'ny fandalinana ny fifandraisany amin'ny fihanaky ny fihanaky ny homamiadana sy ny fihanaky ny homamiadana. Ny fitomboan'ny ROS dia mandika amin'ny loza lehibe kokoa amin'ny toe-piainana noho ny apoptose na ny ratra sela.
Fiarovana ny aretina mikraoba
Ny zavatra manohitra ny mikroba amin'ny lactoferrin dia manapaka amin'ny otrikaretina bakteria, viriosy, parasitita ary ny areti-mifindra.
Miroborobo ny mikraoba ary miankina amin'ny vy amin'ny fivoarana sy ny fivelomana. Rehefa nanafika ny mpampiantrano azy izy ireo, ny LF dia manelingelina ny tanjaky ny fampiasana vy.
Nandritra ny dingana voalohan'ny tsimokaretina, ny lactoferrin (LF) dia nanao dingana hanohitra ny fanentanana vahiny amin'ny fomba roa. Ny proteinina dia mety hanakana ireo sela mpandray ireo finday na hifatotra amin'ny otrikaretina, noho izany, hisorohana ny fidirany amin'ny mpampiantrano azy. Ny hetsika anti-mikroba hafa amin'ny lactoferrin dia ahitana ny fanamafisana ny fomba sela amin'ny pathogen na manakana ny metabolisma karbônina.
Fandinihana maromaro no ampiasaina amin'ny vovony lactoferrin vovobony amin'ny fitantanana ny virus Herpes, ny otrikaretina VIH, hepatitis C ary B, influenza, ary hantavirus. Ankoatr'izay, ny famenoana dia nanakana ny fihanaky ny alphavirus, rotavirus, papillomavirus olombelona ary maro hafa.
Amin'ny tranga sasany, Lactoferrin dia mety tsy handroaka ireo otrikaretina rehetra fa azonao antoka fa hampihena ny fahasarotan'ny vesatra efa misy izao. Tamin'ny fandinihana teo aloha dia nahomby ny LF tamin'ny fandroahana ny pseudovirus SARS. Hatramin'ny nianjera tao SARS-CoV ny SARS-CoV-2 dia mety hisy hampihena ny hatsaram-panahin'ireo COVID-19 ny lactoferrin.
Na dia mihazona fanafody aza ny fampitomboana ny fiasan'ny hery fiarovana anao dia tsy miaro ny iray amin'ny coronavirus, ny fametrahana lactoferrin kosa dia hanampy amin'ny ady. Rehefa dinihina tokoa, ireo dokotera mitovy dia nahatsikaritra fa ny antitra sy ny olona voan'ny tsy fahampiana mivaingana dia tandindonin-doza amin'ny fanaovana fifanekena COVID-19.
5. Lactoferrin Powder Fampiasana sy fampiharana
Ny vovony feno Lactoferrin dia misy amin'ny mpikaroka siantifika sy manam-pahaizana maniry ny hametraka ny lanjan'ny fanafody amin'ny vatan'olombelona. Manana prospectezy amin'ny ankapobeny ny fisorohana aretina, ny famenon-tsakafo otrikaina, ny sakafo sy ny fanafody antiseptika, ary ny kosmetika.
Ho an'ny fanadihadianao sy ny fanandramana lab dia asaivo miantoka loharano avy amin'ireo mpamatsy vovo-doko lactoferrin.
Lactoferrin vovoka mampiasa vovoka ronono zazakely
Ny alikaola fandefasana zaza dia manatsara hatrany amin'ny taratry ny biochemistry ny tena rononon-dreny avy amin'ny reny. Lactoferrin no proteinina roa lehibe indrindra ao amin'ny rononon-dreny. Malaza noho ny mitondra ireo karazam-bokatra rehetra ho an'ny zaza ao anatin'izany ny fatorana vy amin'ny tsy fahampiana, ny fisorohana ny homamiadana ary ny fanentanana ny taolana salama.
Lactoferrin dia ampahany betsaka amin'ny rononon-dreny voalohany izay fantatra amin'ny hoe colostrum. Colostrum dia manodidina ny avo roa heny isaky ny mililiter ho toy ny ronon-dreny matotra. Izany dia ilazana fa ny zaza faran'izay kely indrindra dia mila fifantohana bebe kokoa amin'ny lactoferrin ho an'ny fampandrosoana tsara indrindra.
Ny fanatsarana ny rafitra fiarovana ny zazakely dia tohanan'ny singa Lactoferrin ao amin'ny fomban'ny zaza. Ny proteinina dia mitana fiasa lehibe eo amin'ny rafitra fiarovana ny zazakely ary misolo tena ny rafitra fiarovana voalohany manohitra virus sy anti-mikroba. Ny voka-dratsin'ny anti-mikroba amin'ny ankapobeny dia mitondra chelation vy, izay tena ilaina amin'ny fitomboan'ny bakteria. Ankoatr'izay, ny lactoferrin dia inoana ihany koa fa miaro antioksidan izay afaka manamafy ny valin-tenan'ny hery fanefitra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahasamihafana, ny fihanaky ary ny fampahavitrihana ireo sela fanefitra.
6. Lactoferrin Side effects
Ny fiarovana ny vidin'ny LF dia misy antony vitsivitsy.
Ny fatra amin'ny Lactoferrin be dia be. Ohatra, rehefa asiana ron-kena ny menaka dia azonao atokisana tsara amin'ny vola be izy mandritra ny herintaona. Saingy, raha ny vokatra avy amin'ny vidim-bary, ny mety hitranga dia ny fihoaram-pefy tafahoatra mandritra ny roa herinandro dia hiteraka korontana ratsy.
Ny voka-dratsin'ny lactotransferrin (LTF) mahazatra dia misy;
Ny akanjo hoditra
Tsy toy ny ankamaroan'ny fanafody fanafody, ny lactoferrin dia azo antoka amin'ny reny miandry sy ny nono mampinono.
Mba hialana amin'ny voka-dratsin'ny lactoferrin, misy fatra iray eo anelanelan'ny 200mg sy 400mg. Tokony ho roa na telo mandimby volana no hakana azy. Amin'ny tranga tsy fahita firy, dia mety hiakatra hatramin'ny enim-bolana ny fotoana.
7. Iza no mety handray soa amin'ny Lactoferrin?
Lactoferrin dia mahasoa ny reny sy ny zaza.
Mandritra ny vanim-potoanan'ny fihetsehana, ny fitantanana ity fanampiny ity dia hisy fiantraikany tsara amin'ny haben'ny zaza ao am-bohoka sy ny fiterahana. Raha mitohy amin'ny fatran'ny lactoferrin ny reny mandritra ny vanim-potoanan'ny lactation, dia hihatsara ny famokarana rononony. Ankoatr'izay, ny zaza dia hirehareha amin'ny kolostrum mba hihazonana ny lanjan'ny vatana mahasalama.
Zaza sy zaza tsy miteraka ary mifangaro
Ny fanampiana fanampiny amin'ny lactoferrin dia manome antoka fa ny zaza iray dia mamorona hery fanefitra mahery vaika raha miaro ny gastrointestinal malemy amin'ny allergens. Ankoatra izany, ny fanampin-javatra dia miasa toy ny laxative, fanampiana amin'ny hetsika tsinay voalohany amin'ny zaza. Ny formula zazakely manan-karena amin'ny colostrum dia misy ao anaty mpamatsy vovoka Lactoferrin an-toerana sy an-tserasera.
Ny fihenan'ny iron
Ny suplementeran'ny Lactoferrin dia mampitombo ny haavon'ny hemoglobin, sela mena ary ferritin. Na dia mampiasa solifara ferrous aza ny ankamaroan'ny olona, ​​raha ny fikarohana fikarohana maro dia manamafy fa mahery vaika kokoa ny lactoferrin.
Raha vegetarian ianao na mpamatsy rà matetika, dia mila sakafo manankarena ianao mba hamokatra ho an'ny ambany hemoglobin sy ferritin ambany. Raha tsy izany, dia afaka manao lactoferrin tsara hividy amin'ny mpivarotra an-tserasera ianao.
Olona manana tsimatimanota ambany
Lactoferrin miaro ny vatana amin'ny pathogens amin'ny fandroahana mikraoba voan'ny areti-mifindra ary manakana ny fihanaky ny bakteria sy ny virus. Ny angovo dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanodinana ireo làlam-panondro famantarana izay tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny valin-tenin'ny mpampiantrano azy.
Lactoferrin dia miasa amin'ny maha mpanelanelana azy, manantona ary mandrindra ny fifandraisana misy eo amin'ny fiasan'ny hery fiarovana. Ohatra, manatsara ny hetsika phagocytic amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny neutrophils sy ny makroôty. Ho an'ny rafi-kery fanentanana mampihetsi-po, ny fitrandrahana io dia manafaingana ny fahataperan'ny sela T-sela sy B-sela, izay maneho sela-piraisan'ny sela sy fahalemem-piraingoana.
8. Lactoferrin miaraka amin'ny IgG
Tahaka ny lactoferrin, IgG na immunoglobulin G dia proteinina miaro mikroba amin'ny ronono mammalian.
Fandinihana maro no natao hanazavana ny fifandraisan'ny lactoferrin sy IgG.
Ny fifantohan'ny lactoferrin amin'ny colostrum dia ambony lavitra noho ny an'ny IgG. Araka ny voalazan'ireo mpikaroka mpikaroka, maro ny fiantraikany amin'ny habetsahan'ny proteinina ao amin'ny ronono.
Ohatra, samy lactoferrin sy IgG dia saro-pady amin'ny hafanana sy ny pasteurization. Ny immunoglobulin G dia mety hahazaka ny fitsaboana hafanana hatramin'ny 100 ° C fa zara raha misy segondra indroa. Mifanohitra amin'izany kosa, mihena tsikelikely ny lactoferrin miaraka amin'ny fitomboan'ny hafanana mandra-pahatongany tanteraka amin'ny 100 ° C.
Fandehanana amin'ireto teboka ireto dia tsy maintsy marihinao fa ny fotoana sy ny hafanana amin'ny hafanana dia dinihina voalohany indrindra rehefa manodinana ny ronono neonatal. Hatramin'ny nifandroritana ronono ny adihevitra, ny ankamaroan'ny olona dia nanapa-kevitra ny hamono ny vovoka.
Ny fifantohan'ny Lactoferrin (146897-68-9) dia eo amin'ny fara tampony taorian'ny nahaterahany. Rehefa mitombo ny fotoana aorian'ny postpartum, dia mihena tsikelikely io proteinina io, angamba noho ny fihenan'ny colostrum. Amin'ny lafiny iray, ny fahalavoana ao amin'ny haavon'ny immunoglobulin G saika tsy azo tsinontsinoavina mandritra ny vanim-potoana lactation.
Na izany aza, ny lactoferrin be latsaka avy amin'ny ronon-dronono dia mbola ho avo kokoa noho ny IgG ny fifantohany. Io tranga io dia mbola mijoro hatrany na amin'ny colostrum, tetezamita, na amin'ny ronono matotra.
Yamauchi, K., et al. (2006). Bovine Lactoferrin: Tombontsoa sy fanaovan-javatra ho fanoherana ny areti-mifindra. Biolojika sy biolojika sela.
Jeffrey, KA, et al. (2009). Lactoferrin ho Mpandrafitra voajanahary voajanahary. Drafitra Fomba fitsaboana ankehitriny.
Lepanto, MS, et al. (2018). Ny fahombiazan'ny fitantanana am-bava Lactoferrin amin'ny fitsaboana ny anemia sy ny aretina anemia amin'ny ratra amin'ny vehivavy bevohoka sy ny tsy bevohoka: fandalinana ifampiraharahana. Frontiers amin'ny fiarovana amin'ny biby.
Mpanefy volamena, SJ, et al. (1982). IgA, IgG, IgM ary Lactoferrin Lisitry ny ronono maha-olona mandritra ny fiandohan'ny fiandohan'ny voalohany sy ny vokatry ny fanodinana sy fitahirizana. Gazety momba ny fiarovana ny sakafo
Smith, KL, Conrad, HR, ary Porter, RM (1971). Lactoferrin sy IgG Immunoglobulins avy amin'ny tanànan'ny renirano Bovine Movary. Journal of Dairy Science.
Sanchez, L., Calvo, M., ary Brock, JH (1992). Ny anjara biolojika amin'ny Lactoferrin. Arsivan'ny aretina amin'ny fahazazana.
Niaz, B., et al. (2019). Lactoferrin (LF): Protein voajanahary anti-mikroba. Gazety iraisam-pirenena momba ny sakafo ara-tsakafo.